बिल गेट्सको दावी : खोपले महिलामा बाँझोपन ल्याउने छ – List Khabar
Home / समाचार / बिल गेट्सको दावी : खोपले महिलामा बाँझोपन ल्याउने छ
admin January 23, 2022 समाचार Leaveacomment 74 Views
भाइरसको नयाँ भेरिअन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण नेपालसहित विभिन्न देशमा पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक देखिएको यो भेरिअन्टलाई त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले सम्भावित चिन्ताको विषय मानेका छन्। दर्जनौँ देशमा भाइरसको यो नयाँ प्रकार फैलिसकेको छ। तीमध्ये धेरै देशले यात्रामा प्रतिबन्ध लागु वा कडाइ गर्दै यसको सम्भावित प्रकोपबाट सुरक्षित रहने प्रयास थालेका छन्।
सामान्यतया पीसीआर परीक्षणका लागि लिइएको नाक तथा घाँटीको स्वाब विश्लेषणका लागि प्रयोगशाला पठाइन्छ। पीसीआर विधिले मानिसमा भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर हेर्छ। प्रयोगशालाअनुसार केहीले भाइरसको निश्चित भेरिअन्ट – जस्तै, डेल्टा वा ओमिक्रोन – पनि किटान गर्न सक्छन्।
यसै क्रमम अहिले विश्वभरि भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खोप दिन थालिएको छ। तर कोभिड खोपबारे तथ्यहीन र मिथ्या दाबीहरू रोगसरह फैलिएको पनि देखिन्छ। प्रायः सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने त्यस्ता अनर्गल चर्चाबाट मानिसहरू कोभिड खोप लिन डराएको वा हिचकिचाएको देखिन्छ।
बीबीसी रीयालिटी चेकले संसारका विभिन्न स्थानमा व्यापक रूपमा फैलिएका त्यस्ता पाँचवटा दाबीको परीक्षण गरेको छ। बिल गेट्सले खोपमार्फत् मानिसहरूको शरीरमा माइक्रोचिप्स जडान गर्न खोजेको तथा कोभिड खोपले महिलामा बाँझोपन गराउने यस्ता दाबी किन अविश्वसनीय छन्? तलको भिडियो सामग्री हेर्नुहोस
Previous खुशिको खबर्: नेपालमा आज संक्रमित घटे नयाँ को-रोना संक्रमित, संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि! (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
Next माघ १० गते सोमवार, यस्तो छ तपाईको भाग्य